Sheekh Berberaawi Oo Sheegay In Ganacsatadu Soo Waaridaan Raashin Khatar Ku Ah Caafimaafka, Dawooyinka Dhacana Dib Looga Iibiyo Shacabka
Sunday 5th March 2017 13:15:03 in Wararka by Super Admin
Hargeysa (Haleel) – Sheekh Cabdillaahi Xasan (Berberaawi) oo ka mid ah Culimada reer Somaliland, ayaa canaan u jeediyey Ganacsatada Dalka, gaar ahaan
Hargeysa (Haleel) – Sheekh Cabdillaahi Xasan (Berberaawi) oo ka mid ah Culimada reer Somaliland, ayaa canaan u jeediyey Ganacsatada Dalka, gaar ahaan kuwo soo waarida Cuntada, Daawooyinka iyo dharka.
Warka Sheekh BarbaraawiSheekhu wuxuu sheegay in Ganacsatada Dharku ay Dalka keenaan Dhar uu sheegay inay waxyeelo ku yihiin Dhaqanka iyo Diinta Dadka Muslimiinta ah ee Reer Somaliland.
Sheekhu wuxuu aad u canaantay Ganacsatada Cuntada iyo Daawooyinka, waxaanu sheegay in Ganacsatada Raashinku soo waaridaan Raashin aan Tayadiisu wanaagsanayn isla-markaana khatar ku ah Caafimaadka Dadka reer Somaliland, halka uu tilmaamay in Ganacsatada iibiya Daawooyinku ay ku kacaan Khiyaamo khatar ku ah Caafimaadka Bulshada, taasi oo ah inay Daawooyinka dhaafay Xilligii loogu talo-galay in la isticmaalo ay Taariikhda ka beddelaan oo ay dib u iibiyaan.
Sheekha oo Arrimahan ku soo qaatay Khudbaddii Jimcaha ee doraad, ayaa yidhi, "Waxa Waddanka la keenayaa Dawooyin Basharka Muslimiinta ah ee halkan ku nool dhib weyn u geysanaya, wax qarsoona maaha oo daawada dhacday baa Taariikhda laga beddelaa, way caddahay oo waxa lagu qabtay Guryo dhan oo Maalintiina xidhan habeenkiina ay Baabuur galaan qaarna ay ka baxaan.”
Sheekhu wuxuu sheegay in Ciidanka Boolisku u daateen Guryo Daawooyinka dhacay Taariikhda lagaga beddelo, "Markii Booliiska loo sheegay ee ay Guryahaa u daateen waxa loogu tagay Karaatoon Dawooyin ah oo Taariikhda laga beddelay markay dhacday (ee ay dhaaftay xilligii loogu talo-galay in la isticmaalo).” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, "Waa maxay Naxariis-darrada intaas leegi.? Muslimiinta ayuu Jidhkooda iyo Caafimaadkooda kharibayaa, marna Nafahooda ayuu saarayaa. Nebi Muxamed (CSW) ayaa iska dayriyey Qofka sidaa yeela, Qofka Shay Xumaantiisa Dadka u qariyaa naga mid maaha ayuu yidhi Rasuulku (CSW).”
Sheekhu waxa kale oo uu aad ula hadlay Ganacsatada Dalka u soo waarida Raashinka, "Cuntada…Ninka Ganacsadaha ahi wuxuu soo iibinayaa ta ugu liidata, ee Ummadda Caafimaadkooda iyo Nafahooda duulimaadka ku ah, haddii la waydiiyo maxaad Cunto wanaagsan oo Tayo leh u keeni wayday? Wuxuu odhanayaa Dadku iibsan maayaan, markaa taa ay ku dhimanayaan ayuu ka iibinayaa oo dan kama laha, waxaanu eegayaa Macaashkiisa.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, "Rasuulku (CSW) wuxuu la hadlay Ganacsatada, waxaanu yidhi ‘Maalinta Qiyaamaha waxa Ganacsatada la soo saarayaa iyagoo dambiileyaal ah.’ Qofku ma muxuu dambiile ku noqonayaa inuu Ganacsado.? Waa Maya, ee wuxuu dambiile ku noqonayaa inuu Ganacsigiisa uu ILAAHAY kaga biqi waayo oo uu samaynta khayrka ku dedaali waayo, xumaanta iyo sharka iska ilaalin waayo, oo Ganacsigiisa uu ku dhibaateeyo Diinta Islaamka, Dadka Caqligooda, Maalkooda, Naftooda, Sharaftooda iyo Cirdigooda.”
Sheekha oo hadalkiisa sii wata, ayaa sheegay, "Ganacsatada yaa bedbaadaya.? Waxa bedbaadeya ka iLAAHAY ka baqa oo Baqa ILAAHAY uu ka baqayaa uu kelifo inuu xaaraanta iska ilaaliyo, Qishka iska ilaaliyo, khayrkana ku dedaalla ee Maalkiisa sadaqadeysta ee Aakhiro wax u sii dhigta.”ayuu yidhi.
Waxa jira Komiishan qaabilsan la socodka Tayada Cuntooyinka iyo Alaabooyinka kale ee Dalka yimaadda, laakiin komiishankaasi si muuqata uma shaqeeyo, maaddaama oo aanu lahayn Qalabkii lagu hubinayey Fayo-qabka Raashinka, Daawooyinka iyo Waxyaabaha kale ee Dalka la keeno.